Banyere Anyị - Dongguan Yong Fang Electronics Technology Co., Ltd.
Dongguan Yong Fang Eletrọniki Technology Co., Ltd.
buotu n'ime ndị ọkachamara na-emepụta si Donguan, Guangdong, China. Anyị nwere ihe karịrị 23 afọ nke mba OEM na ODM n'ichepụta ọrụ ahụmahụ na wireless & Wired Ekwe ntị na ntị ntị.
N'ime ụlọ ọrụ mita 6000 anyị zuru oke na nke zuru oke, enwere ahịrị nrụpụta nke ọma nke asatọ. Na mkpokọta, anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ nwere nkà na ndị nwere ahụmahụ otu narị na iri abụọ. Ike imepụta kwa ụbọchị ruru 5000-8000 PC. E wezụga nke ahụ, anyị nwere ndị ọrụ R & D ọkachamara maka atụmatụ ọhụrụ na ihe okike, gụnyere ndị injinia 3D, ndị injinia eletrọniki, ndị injinia egwu, ndị na-ese ihe osise na ndị ọzọ.
Maka ngwaahịa niile sitere na ụlọ ọrụ anyị, ndị otu anyị na-enyocha ha dabere na ntụkwasị obi na ụkpụrụ nchekwa na ụlọ nyocha nyocha anyị nwere ntụkwasị obi, yana maka ọtụtụ ngwaahịa, ha na CE, ROHS, Reach, FCC, Nsogbu ụda, KC na akwụkwọ nyocha ma ọ bụ asambodo ndị ọzọ.
Ebumnuche anyị bụ ịbụ ezigbo onye ọrụ nrụpụta ụwa zuru ụwa ọnụ na-enye nnukwu ngwaahịa na ọrụ. Ruo ugbu a, anyị ejiriwo obi eziokwu na ọrụ ọrụ na-enye ihe mbụ, ihe okike, na ngwaahịa dị mma na ọrụ ndị ahịa na-enye afọ ojuju karịa ndị ahịa 100 sitere na mba 87 na mba dị iche iche.